Rise of Raider xabaashii Crack Update 12 iyo Activator
Home » crack & Activators » Rise of Qabriga Crack Raider for PC ah
Rise of Qabriga Crack Raider for PC ah
Rise of Qabriga Crack Raider for PC waa tallaabo la maroojin ah ciyaarta video biimayn. storyline ee ciyaarta soo socota Lara Croft iyada oo mashaariic galay Siberia in search of magaalada halyeeyga ah Kitezh. Dagaal bulsho milatariga in ujeedadiisu at iyada garaaceen ballanku ee magaalada waaridda. Ciyaarta ayaa inta badan diiradda saartaa badbaadada iyo dagaal. Oo weliba, ciyaaryahan sahmin doonaa muuqaalkii iyo kala duwan optional tombs.Camilla Luddington baxdo dib codka iyo fulinaya iyada doorka sida Lara. Ciyaartoyda u leeyihiin in ay ka taliyaan Lara iyada oo xaalado kala duwan sida soo horjeeda dagaal, iyo dhameysteen qaybaha madal xujo. Waxay isticmaalaa qalabka kala duwan si loo horumariyo oo la tag on iyada oo sheekada. Intaas waxaa sii dheer, Lara isticmaali karaan deegaanka in ay iyada faa'iido ee ciyaarta. Waxay qarin karaan in ay duurka ama geedaha. More xiiso waxaa lagu farsameeyo helidda ilimaysiisa iyo bam cooshado, toogtay fallaadho at walxaha wayntii cadaawayaashaada.
Camilla Luddington dib baxdo in ay codkooda iyo fulinaya iyada doorka sida Lara. Ciyaartoyda u leeyihiin in ay ka taliyaan Lara iyada oo xaalado kala duwan sida soo horjeeda dagaal, iyo dhameysteen qaybaha madal xujo. Waxay isticmaalaa qalabka kala duwan si loo horumariyo oo la tag on iyada oo sheekada. Intaas waxaa sii dheer, Lara isticmaali karaan deegaanka in ay iyada faa'iido ee ciyaarta. Waxay qarin karaan in ay duurka ama geedaha. More xiiso waxaa lagu farsameeyo helidda ilimaysiisa iyo bam cooshado, toogtay fallaadho at walxaha wayntii enemies.Additionally, Lara ayaa xoogga rooftops oo Toggooda iyo sidoo kale iska ilaali karaa dagaal wadajir by la koro geedaha. Noocyada kala duwan ee qaansooyin la samayn karaa si ay u isticmaalaan ka xoolaha gaar ah iyo qalabka oo Lara ugaarsan karo iyo biraha. Lara ee bastoolad, Koridda faasas iyo Kai, qoriga weerar kasta oo la kala duwanaansho ay tahay in talaabo. items New in Kac ee ciyaarta Crack Raider Qabriga waxaa ka mid ah mindida ugaarsiga loogu talagalay dhalisay ama dhuumasho weerar ah. A dib-u-leeyr waxaa sidoo kale ku daray oo sahamin quuska, iyo qaadista a in la furo qufulka saxaradaha qufulan iyo makaanikada doors.Platforming sidoo kale ay qayb ka yihiin tuurnimo sida boodayaa weerarka ka dhanka kalena deyr ka taagan iyo dabaasha. Lura samayn karaa boodada qarka inay qarka sidoo kale dharbaaxay on trapeze ah.
Intaa waxaa dheer, Lara ayaa xoogga rooftops oo Toggooda iyo sidoo kale iska ilaali karaa dagaal wadajir by la koro geedaha. Noocyada kala duwan ee qaansooyin la samayn karaa si ay u isticmaalaan ka xoolaha gaar ah iyo qalabka oo Lara ugaarsan karo iyo biraha. Lara ee bastoolad, Koridda faasas iyo Kai, qoriga weerar kasta oo la kala duwanaansho ay tahay in talaabo. items New ciyaarta waxaa ka mid ah mindida ugaarsiga loogu talagalay dhalisay ama dhuumasho weerar ah. A dib-u-leeyr waxaa sidoo kale ku daray oo sahamin quuska, iyo qaadista a in la furo qufulka saxaradaha qufulan iyo makaanikada doors.Platforming sidoo kale ay qayb ka yihiin tuurnimo sida boodayaa weerarka ka dhanka kalena deyr ka taagan iyo dabaasha. Lura samayn karaa boodada qarka inay qarka sidoo kale dharbaaxay on trapeze ah. u kaca ee crack PC xoolo xabaashii furfuraya masalooyin aad. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah muuqaalada kaca oo xabaashii crack xoolo.
Rise of Raider xabaashii Crack Game Miyuu Features yaabka leh
Ciyaartoyda abuuri kara waxyaabaha sida noocyada kala duwan arrow (sun, bam-gacmeed, Xadhig, climbable, dabka) jawi ciyaarta ee adag by qalabka dhirta iyo xayawaanka faganaya.
Labada characters dadka iyo xoolaha fal kartaa in wareegga habeen iyo maalin-a.
Tusaale ahaan, haddii waxa la joogaa wakhtigii qabowga Lara waa ugaadhsan Yey oo kaliya baxa inta lagu guda jiro waqti gaar ah ee maalintii si ay u abuuraan jaakad hardier a jiilaalka
Lara dabaalan karin kaas oo ku daraya in ay xeelad dagaal, iyada oo.
dhacdooyinka waqtiga Quick:
samayn karaa soo gebgabeeyay doodihii si looga fogaado in dabin dilaaga ah ee ciyaarta oo uu ku sameeyo dhameysteen weeraro iyo counters.
Waa sahal in la ciyaaro:
Waa xiiso leh oo ay fududahay in la ciyaaro ciyaarta fursado siman u dhaqaaqdo.
Bbc Beautiful iyo goobaha qurux badan, views buurta, iwm. siiyo ciyaaryahanka si ay u dareemaan wax walba oo ka dhacaya for dhabta ah. Ka dhigaysa ciyaaryahanka hesho dheeraad ah ku lug waxa ku jira.
Sida loo Isticmaalo & Rise of Crack Raider Qabriga
Download kaca ee xaaladda crack xoolo xabaashii free by Locker siiyey
Hadda Download ciyaarta ka button siiyey
ka tusaha ciyaarta beddel file crack ah
Ku raaxayso ciyaarta ayaa xabaashii xoolo crack.
← Be Crack Ducooyinkii carabida preload v1.9 Minecraft Hacker WiFi APK 2017 →